HTC One M10 သည်ဤသို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ | Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က HTC One M9 ၏တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ပိုက်ကွန်၏ဆက်ခံသူဖြစ်သည့် HTC One M10 ၏ကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ များစွာသောလူတို့ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည့်အရာနှင့်လက်ရှိ M9 ရှိနိုင်သည်။
Mobile World Congress အတွင်းလူအများစုအတွက် HTC One M9 ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပေမယ့် HTC One M8 ဟာသူ့ရဲ့ယခင် M6 ကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေပုံရတယ်။ သူကသတ်မှတ်ချက်များကိုအခြားကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်း၊ Galaxy ။ SXNUMX
ဤသည်ပျံ့နှံ့နေပုံရသည့်စိတ်ပျက်စရာသည် terminal ၏အင်္ဂါရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည်5x 1920 pixels resolution ဖြင့် ၅ လက်မ IPS နှင့် LCD panel တို့၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါဝင်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် M1080 တွင် RAM9GB ရှိပြီး high-end Android range ၏အခြား terminals များနှင့် Qualcomm 3-bit octa-core Snapdragon 810 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။ စွပ်စွဲအပူ။ အခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်လုပ်ပါက M9 သည်နောက်ဖက်တွင် 20-megapixel ကင်မရာနှင့် 4-megapixel ရှေ့မျက်နှာစာ၊ 2,840mAh ဘက်ထရီကိုမည်သည့်အချက်အလက်များအကြားမီးမောင်းထိုးပြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
များစွာသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း terminal သည်၎င်း၏ညီငယ်များနှင့်တူညီသောဒီဇိုင်းမျဉ်းကိုလိုက်ခဲ့သည့်အတွက်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြသူများစွာရှိသည်။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကသုံးစွဲသူကသူမျှော်လင့်တဲ့အယူအဆကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းသည် M10 ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောကုမ္ပဏီဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအယူအဆမှာငါတို့က သတ္တု၊ ဖန်၊ အလူမီနီယမ်နှင့်အရောအနှောရောနှောတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းဟာ Galaxy S6 အသစ်နဲ့ဘယ်လိုဆင်တူတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ မီးမောင်းထိုးပြရမည့်အခြားအရာများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူသည် volume ခလုတ်အသစ်များ (သို့) အသစ်သော design element များကိုမည်သို့မည်ပုံမိတ်ဆက်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည် အသစ်သော USB-C ကို connector ကို.
စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်ရှည်လျားသောသွားခြင်းနှင့်ဤလှပသောအယူအဆကိုဖန်တီးသူသည် HTC One M10 ၏ဤအယူအဆတွင်သူ၏စိတ်ကူးအားလုံးကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်မှာသေချာသည် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပင်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ယူမည့် terminal တစ်ခုသည်လက်ရှိတွင်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကအရာဖြစ်သည့်အရာသည်စျေးကွက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တဖန်သင်တို့အဘို့, သင် M10 ၏ဤအယူအဆကိုဘယ်လိုထင်သလဲ , လက်ရှိ M9 နဲ့မတူတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးရှိတာကိုသင်ကြိုက်မှာပါ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One M10 သည်ဤသို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
M10 သည် M9 နှင့်အတူတူဖြစ်သင့်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်… စောင့်နေတဲ့တစ်နှစ်ကအပြစ်တင်ဖို့ပါ။
m9 ၏ပြန်ဆိုခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် m8 တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည် ။-(! htc သည်အသုံးပြုသူများကိုတစ်ကြိမ်နားထောင်မည်လား။
Raul Jimenez ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းအောင်မြင်မှု၊ သစ္စာရှိမှုနှင့်သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုသည်“ x” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား“ ဗီတာမင်ဓာတ်” ထုတ်ကုန်ကိုဆက်လက်ပေးနေခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ယခင်က HTC၊ Samsung နှင့် Apple တို့ကဲ့သို့လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်4နှစ်တာကာလအတွင်း။
Raul Jimenez သို့စာပြန်ပါ
AutoMate ကြောင့်မည်သည့်ဖုန်းမှမဆို Android Auto